AbaMongameli bexesha elidala abanokufumana izibonelelo kuzo zonke
NgoJulayi 22, 2016, uMongameli u-Obama wanikezela uMthetho woMongameli weMimiselo yokuHlanywa kweMongameli, oya kuwanciphisa iipenshini kunye nezibonelelo ezihlawulwe kubabeengameli.
Ngomyalezo wakhe we-veto kwiCongress, u-Obama wathi le ntlawulo "iya kubangela umthwalo ongenangqiqo nangengqiqo kwiofisi zangaphambili zoomongameli."
Kwisikhululo seendaba esilandelayo, iNdlu ye-White yongezelela ukuba uMongameli uye wavusa umgaqo-mthetho ngenxa yokuba "iya kuphelisa ngokukhawuleza umvuzo kunye nazo zonke izibonelelo kubasebenzi abenza imisebenzi esemthethweni babengumongameli-beshiya ixesha okanye indlela yokuba batshintshe omnye umvuzo. "
Ukongeza, yathi iNdlu ye-White House, ibhilikhwe yayiya kwenza nzima ngakumbi kwi-Secret Service ukukhusela abaongameli bexesha kwaye "iza kuphelisa ngokukhawuleza ukuqeshisa, kwaye isuse ifenitshala kwiiofisi zangaphambili zoomongameli ezisebenzayo ukuzalisekisa uxanduva lwabo oluntu oluqhubekayo."
I-White House yongezelela ukuba uMongameli wayezimisele ukusebenzisana neCongress ekuxazululeni imiba yakhe kunye neli bhili. "Ukuba iCongress inika izilungiso zobuchwepheshe, umongameli uza kusayina le ntlawulo," kutsho i-White House.
INdlu yeNdlu i-White House yathi uMongameli uye wavusa umthetho-mthetho emva kokuxoxisana nabanye babesakuba ngabomongameli basekuqaleni kwaye i-veto "yayiphendula ngokuxhalabisa kwabo."
Ukuba kwakungenakuvotelwa, uMthetho woMongameli woMongameli wokuBonelelwa kweMvume uza kuba:
Nciphisa iPenshini kunye neZibonelelo zeMongameli zangaphambili
Nangona ingakhange ijoliswe ngokukodwa kuBill Clinton , owenze i-$ 104.9 yezigidi "ukuhlawula iindleko" ekuthetheni iindleko zodwa, ibhilikhwe yayiya kunciphisa iipenshini kunye nezibonelelo zabangaphambili bongameli .
Ngaphantsi koMthetho wangaphambili wooMongameli, ababengumongameli bafumana ipenshoni yonyaka elinganayo nemirhumo yabobhala beeKhabinethi.
Ngaphantsi koMthetho woMongameli weeMvume zoMongameli, iipenshini zazo zonke zangaphambili zangaphambili nezakuba yakuba ngumongameli zangaphambili ziza kufakwa kwi-200,000 yee-$ 000 kwaye ukuhanjiswa kwangoku phakathi kweempesheni zomongameli kunye nomvuzo wonyaka weNobhala weKhabinethi bekuya kususwa.
Ukutshintshwa kwezinye izibonelelo ngeSibonelelo esisodwa
Umthetho osayilwayo uza kususa ezinye iintlawulo ezibonelelwa kubongameli bexesha langaphambili, kubandakanye nezohambo, abasebenzi kunye neendleko zeofisi. Esikhundleni saloo ndlela, ababengumongameli bebeya kuba banikezelwa imali eyongezelelweyo yee-200,000 yezibonelelo ezazisetyenziselwa yona.
Ngamanye amagama, phantsi kwe-Bill ye-Chaffetz, ababengumongameli babeza kufumana umhlala-phantsi wonyaka kunye nesibonelelo esingabi ngaphezu kwama-400,000 e-$.
Nangona kunjalo, phantsi kwelinye ilungiselelo lomthetho-mali, iipenshini kunye nezibonelelo ezihlawulwe kubabeengameli zangaphambili zinokunciphisa ngakumbi okanye zigqitywe ngokupheleleyo yiCongress.
Ngaphantsi kweNgxowa-mali ye-Chaffetz, ukuba yonke i-dollar eyakuba ngumongameli ifumana imali engaphezu kwama-400,000, imali yabo yesibonelelo sonyaka-mali iya kuncitshiswa nge-$ 1. Ukongezelela, ababengumongameli abaye babambelela nayiphi na isikhundla esikhethwe kwi- federal government okanye kwiSithili saseColumbia bengenakufumana ipensheni okanye isibonelelo ngelixa bephethe loo ofisi.
Ngokomzekelo, ngaphantsi kweChartetz isicwangciso sohlwayo se-dollar-to-dollar, owayengumongameli uClinton, owayesenza iidola ezili-10 ezigidi ukuthetha iintlawulo kunye nencwadi yokuhlawula imali ngo-2014, ayengayifumana ipensheni okanye izibonelelo kuzo zonke.
Kodwa Abahlolokazi bobuMongameli babeza kubonakala benyuka
Umthetho osayilwayo uza kukwandisa isibonelelo esikhokhelwa kwabasetyhini abasemaphandleni abaye bavela kwi-20,000 ukuya kwii-100,000 zamawaka ngonyaka. Okwangoku, elinye iqabane eliseleyo lomongameli wangaphambili nguNancy Reagan, owathola i-$ 7,000 kwiintlawulo ngo-2014, ngokwe-Congressional Research Service.
Ngaba Abanamhlanje AbaPhathi Bakhe Bafumana Njani?
Ngokwe-ingxelo ka- Ephreli ka-2014 ye-Congressional Research Service , abo babesakuba ngabamongameli abaqalayo bafumana ipensenti karhulumente kunye neenzuzo zokubonelela ngo-2014 zizonke:
UJimmy Carter - $ 470,000
UGeorge HW Bush - $ 837,000
UBill Clinton - $ 950,000
UGeorge W. Bush - $ 1,287,000
I-Chaffetz kunye nabanye abaxhasayo kuMthetho woMongameli weeMvume zoMongameli bathi amaxesha angaphambili abaengameli ababanakwenzeka ukuba banamathengi ngemali, uluvo oluxhaswa yi-Congressional Research Service (CRS).
"Akukho mongameli wangaphambili othe wavakalisa esidlangalaleni ukuba unenkxalabo enkulu yemali," kuchaza ingxelo ye-CRS. Kodwa, oko akunjalo ngaso sonke isikhathi.
Ngaphambi kokumiselwa koMthetho woMongameli wangaphambili ngowe-1958, ababengumongameli abazange bafumane ipension pension okanye omnye uncedo lwemali kuwo onke, kwaye abanye babandezeleka "ngamaxesha anzima."
"Abanye ababengumongameli- njengoHerbert Hoover noAndrew Jackson - babuyela ebomini bobuncwane be-post-president," kuchaza i-CRS. "Abanye ababengumongameli - kuquka u- Ulysses S. Grant kunye noHarry S. Truman - bazama ukufumana imali."
Umongameli owayengumongameli uTruman, umzekelo, wathi ukuphendula nje ngeposi kunye nezicelo zeentetho zibiza i-30,000 ngonyaka.
Imeko yangoku Yilwayo
UMthetho woMongameli weeMvume woMongameli wenziwe nguMthetho weeNdwendwe ngoJanuwari 11, 2016, kunye neSenethi ngoJuni 21, 2016. Ibhilikhwe, njengoko idluliselwe yiNdlu kunye neSeti, yavotelwa nguMongameli Obama ngoJulayi 22, 2016.
Ngomhla we-5 kuDisemba, ngo-2016, ibhilikhwe, kunye nomyalezo kaMongameli Obama ohamba kunye ne-veto, yayithunyelwe kwiKomidi yeNdlu yoLongamela kunye noHlaziyo lweeRhulumente. Emva kweengxoxo, ikomiti yenze isigqibo malunga nokuzama ukunyusa i-veto yomongameli.
Izinto Ezilishumi Zokumazi NgoHarry Truman
Andrew Johnson Iinkcukacha ezifutshane
Ukuhlaziywa kwexesha eli-1619 ukuya ku-1696
Indlela Yokuthandaza Ngakumbi Imimangaliso Yenzeke
Izakhono zoLuntu kwiZakhono zeMfundo eziZodwa